AhLoungMinThaYar's Page - MyanmarITPro - A Social Network for Myanmar IT Professionals
yangon, yangonMyanmar Share on Facebook
Blog Posts (4)Discussions (7)EventsGroups AhLoungMinThaYar's Likes AhLoungMinThaYar's Discussions
၉၁၁၁ - ဩ Unicode နှငျ့ လူပွိနျးအမွငျနှငျ့ လူပွိနျးအတှေး (၃)။ So sorry Bar Camp
No Description Started Apr 1, 2010 Standard is Standard.
၉၁၁၁ - ဩ Unicodeကြှေးဇူးပါပဲ ကို Wayne, Mr. Ranka ..ကြှနျတော့ Bolgs က အမှားမြားကို ပွသပေးတဲ့အတှကျ အထူးကြေးဇူးတငျပါတယျ။လူပွိနျးအမွငျနှငျ့ လူပွိနျးအတှေး(၀) နှငျ့ (၁) ကို ဖတျလို့ရအောငျ…Continue Started Mar 30, 2010 ၉၁၁၁ - ဩ Unicode ၊ လူပွိနျးအမွငျနှငျ့ လူပွိနျးအတှေးမြား
၉၁၁၁ - ဩ Unicodeကြှေးဇူးပါပဲ ကို Wayne. To be install Myanmar Unicode Standard fonts.မနကေ့ လူပွိနျးအမွငျနှငျ့ လူပွိနျးအတှေး (၂)။ ကို bolg တငျပွီး နောကျဆကျတှဲ တငျမရဖွဈသှားလို့ပါ။ (Sign in မရတော့ပဲ…Continue Started this discussion. Last reply by AhLoungMinThaYar Mar 30, 2010. View All
AhLoungMinThaYar has not received any gifts yet
Give AhLoungMinThaYaraGift
At 5:52pm on May 15, 2010, U AUNG THAN said… ဒီနေ့မှ စာပြန်ဖြစ်လို့ စိတ်မဆိုးပါနဲ့နော်။ ကျွန်တော်ပြုလုပ်လိုတဲ့ Font အမျိုးအစားက True Type ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဥပမာ ပြောရလျှင် ( W 01 Art House ) မြန်မာစာလုံးပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ တတ်နိုင်လျှင်တော့ Unicode Font မျိုးဆိုပိုကောင်းတာပေါ့။ ယခု ကျွန်တော်စမ်းသပ်တာပြောရလျှင် Corel draw မှာ စာတစ်လုံး ဆွဲ၊ BMP နဲ့ Save လုပ်၊ Font Creater နဲ့ Generate လုပ်ပြီး။ Macromedia Fontographer နှဲ့Save လုပ်သိမ်းပါတယ်။ အဲဒီတော့ True Type Font တော့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် New Symbol Font ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ထွက်လာပါတယ်။ Keyboard မှာ အထက်-အောက်စာလုံးများရိုက်နိုင်ပြီး၊ Alt Key ဖြင့် နံပါတ်များတွဲခြင်းဖြင့်လည်း ကျန်စာလုံးများကို သုံးနိုင်ပါတယ်။ လွယ်တာလေးများရှိလျှင် နည်းပြပါနော်။ Program တွေနဲ့တော့ မသုံးတတ်ပါဘူး။ နောက်ပြီး ဆရာ့Blog မှ မြန်မာ စာလုံးများကို ကျွန်တော်မဖတ်တတ်ဘူး။ သည်းညည်းခံပါနော်။ လေးစားလျက်- No comments yet!